अन्तर्दृष्टि | Infomala - Part 8
Comments Off on निष्क्रियता
एक दिन सडकमा…
Comments Off on एक दिन सडकमा…
फोटो र पेन्टको मिश्रण
Comments Off on फोटो र पेन्टको मिश्रण
Comments Off on नयाँ फेरारी
कति सजिव छन् यी ?
कति सजिव छन् यी चित्रहरू ? यी चराहरू कागज र वाटरकलरको प्रयोगले बनाइएका हुन् । साभार- Johan Scherft/Colossal
Comments Off on कति सजिव छन् यी ?
एन्जेलीनाको एक तस्वीर ४० हजार युरो
सन २००१ मा खिचिएको अन्जेलिना जोलीको एक फोटो ४० हजार युरोमा बिक्री गरिने भएको छ । बलिउड स्टार ब्राद पितकी स्टार श्रीमति जोलीको नाङ्गो, टट्टू भएको र सेतो घोडासँग खिचिएको सजिव सो फोटो आउँदो मे १५ मा लन्डनमा बेचिने कार्यक्रम छ ।
Comments Off on एन्जेलीनाको एक तस्वीर ४० हजार युरो
Comments Off on बाघको बच्चा
रूखः एक कला
Comments Off on रूखः एक कला
दुइ चक्काले गाडी ड्राइभिङ्ग
Comments Off on दुइ चक्काले गाडी ड्राइभिङ्ग
नर्वेको रोमाचंक रोड
Comments Off on नर्वेको रोमाचंक रोड
संसारको सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी आवास
Comments Off on संसारको सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी आवास
म्याराडोनाको चे ट्याटु
क्युवाली क्रान्तिका नायक चे ग्वेभाराचलाई म्याराडोना आदर्श व्यक्तित्व मान्छन् । उनले आफ्नो दायाँ पाखुरामा उनै चेको ट्याटुसमेत खोपेका छन् । ट्याटु खोपेपछि उनले भने, 'यो यस्तो समय हो कि दुई महान् अर्जेन्टिनी एउटै शरीरमा एकीकृत भएका छन् ।' फुटबल र विवादका पर्याय हुन् म्याराडोना अमेरिकाको कट्टर आलोचक हुन् ।
Comments Off on म्याराडोनाको चे ट्याटु
अन्तर्दृष्टि / महिला संसार
Comments Off on महिला दौड
हाल पाइनेभन्दा तिन गुना ठुला उँट आर्कटीक क्षेत्रमा लोप भएको तथ्य वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् ।
Comments Off on डाइनोसर जस्तै लोप उँट
Reports / अन्तर्दृष्टि
Comments Off on मान्छे जस्तो कुकुर